2 Madzimambo 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 16:1-20
16 Mugore rechigumi nemanomwe raPeka mwanakomana waRemariya, Ahazi+ mwanakomana waJotamu mambo waJudha akava mambo. 2 Ahazi akanga aine makore makumi maviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nematanhatu ari muJerusarema; uye haana kuita zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake sezvakaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+ 3 Akafamba nenzira yemadzimambo aIsraeri,+ akapinzawo mwanakomana wake mumoto,+ maererano nezvinhu zvinosemesa+ zvemarudzi akanga adzingwa naJehovha nokuda kwevanakomana vaIsraeri. 4 Akaramba achibayira zvibayiro uye achikwidzira utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira+ nepazvikomo+ nepasi pemiti yose yakasvibirira.+ 5 Panguva iyoyo Rezini+ mambo weSiriya naPeka+ mwanakomana waRemariya mambo waIsraeri vakauya kuzorwisa Jerusarema, vakakomba Ahazi, asi havana kukwanisa kurwa.+ 6 Panguva iyoyo Rezini mambo weSiriya akadzorera Erati+ kuEdhomu, achibva abudisa vaJudha muErati; uye vaEdhomu vakapinda muErati, vakaramba vachigara imomo kusvikira nhasi. 7 Naizvozvo Ahazi akatuma nhume kuna Tigrati-pireseri+ mambo weAsiriya achiti: “Ndiri muranda wenyu+ nomwanakomana wenyu. Uyai mundiponese+ muchanza chamambo weSiriya nomuchanza chamambo waIsraeri, vari kundimukira.” 8 Naizvozvo Ahazi akatora sirivha nendarama yaiva muimba yaJehovha nomunzvimbo dzaichengeterwa pfuma yeimba yamambo,+ akatumira mambo weAsiriya chipo.+ 9 Mambo weAsiriya akabva amuteerera uye mambo weAsiriya akaenda kuDhamasiko+ akaritora,+ akatapa vanhu varo, akavaendesa kuKiri,+ uye akauraya Rezini.+ 10 Mambo Ahazi+ akabva aenda kunosangana naTigrati-pireseri+ mambo weAsiriya kuDhamasiko, akaona atari+ yaiva muDhamasiko. Naizvozvo Mambo Ahazi akatumira mupristi Urija mufananidzo weatari yacho nemagadzirirwo ayakanga yakaitwa.+ 11 Mupristi Urija+ akavaka atari yacho.+ Mupristi Urija akaigadzira maererano nezvose zvakanga zvatumirwa naMambo Ahazi kubva kuDhamasiko, munguva iyo Mambo Ahazi akanga asati adzoka kubva kuDhamasiko. 12 Mambo paakauya achibva kuDhamasiko, mambo akaona atari yacho; uye mambo akaswedera pedyo neatari yacho,+ akapira zvinopiwa pairi.+ 13 Akaramba achiita kuti zvinopiwa zvake zvinopiswa+ nezvinopiwa zvake zvezviyo+ zvipfungaire,+ akadurura chinopiwa chake chinonwiwa,+ akasasa ropa rezvibayiro zvake zvokugoverana paatari yacho. 14 Zvino akabvisa atari+ yemhangura yaiva pamberi paJehovha, pamberi peimba, pakati peatari yake neimba yaJehovha,+ akaiisa kurutivi rwokuchamhembe rweatari yake. 15 Mambo Ahazi akarayira mupristi Urija+ achiti: “Ita kuti chibayiro chinopiswa chemangwanani chipfungairire paatari huru,+ nechinopiwa chezviyo chemanheru+ nechinopiwa chinopiswa chamambo+ nechinopiwa chake chezviyo nechinopiwa chinopiswa chevanhu vose vomunyika yacho nechinopiwa chavo chezviyo nezvinopiwa zvavo zvinonwiwa; uye usase ropa rose rechinopiwa chinopiswa neropa rose rechibayiro pairi. Asi atari yemhangura ichava chinhu chandichafunga nezvacho.” 16 Mupristi Urija+ akaita maererano nezvose zvakanga zvarayirwa naMambo Ahazi.+ 17 Mambo Ahazi akacheka-chekawo+ marata omumativi+ ezvingoro,+ akabvisa mabheseni+ pazviri; uye akabvisa dziva+ panzombe+ dzemhangura dzakanga dziri pasi paro, akabva ariisa panzvimbo yakanga yakarongwa matombo. 18 Akabvisa nzvimbo yakanga yakafukidzwa yesabata yavakanga vavaka muimba yacho uye paipinda namambo pokunze muimba yaJehovha nokuda kwamambo weAsiriya. 19 Mamwe mabasa ose aAhazi, nezvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 20 Ahazi akazorara nemadzitateguru ake, akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi;+ uye mwanakomana wake Hezekiya+ akatanga kutonga panzvimbo pake.
2 Madzimambo 16